Izingubo kusuka udoti izikhwama ngezandla zabo: imiyalelo, izithombe
Abaklami emhlabeni wonke nsuku zonke kusimangaze ezenzweni zabo. Ngokuhamba kukhona tintfo letitinhlobonhlobo. Kulesi Indwangu zakudala ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba sokugcina. Abaningi baye bakwazi ukubona nezingubo isithombe kusuka inyama ehlaza noma amaphakheji amazambane chips. Futhi lo mkhuba yakamuva fashion izingubo ezenziwe udoti izikhwama. Manje sengathi umklami wangempela can ngayinye ubulili fair. Original ingubo Cellophane kungenziwa ekhaya.
Lapho ukugqoka ingubo kusuka isikhwama udoti
Lokhu ngubo, yebo, kungaba uyibize ngokuthi kwansuku zonke. Futhi usizo olukhulu akusona ezahlukene. Cellophane, eyenziwe izingubo, akakwazi ngokuthi endaweni ehlanzekile futhi imvelo. Nokho, owesifazane ngamunye ungenza ingubo kusuka udoti izikhwama ukukhonjiswa imfashini. Kunalokho, kungamandla inketho ukuzijabulisa. Uma axhaphaze lezi izingubo akuzona isikhathi esingaphezu kwamahora ambalwa, umonakalo ke nakanjani ngeke nilingenise.
Unyaka omusha Carnival - lena esinye isizathu ingubo yasekuqaleni. Nge udoti izikhwama ungakha ingubo emangalisa ukuthi nakanjani ukuze bahlabe abanye umxhwele. Futhi uma ukukhombisa nje kancane, ngokuvamile kunzima ukucabanga ukuthi izingubo ezenziwe kwaziswa namanzi. Ngaphezu kwalokho, igqoka udoti izikhwama angadingi amakhono akhethekile kanye nezindleko ezinkulu ngokwezimali lapho ziyadalwa.
Yini edingekayo ukuze isebenze?
Ukuze wenze ngubo enhle, kwasekuqaleni kuwufanele isineke. Phela, wobuciko akusebenzi njalo okokuqala. Kuyinto efiselekayo ukuthi imikhiqizo eyenziwe umuntu oyedwa. Phela, wonke umuntu imiqondo yabo siqu, imibono okunzima nokuqalisa ngesikhathi esifanayo.
Uma senza igqoka kusuka udoti izikhwama ngaphandle kokusebenzisa ezinye okudlekayo, bese lokuthunga izimpahla angeke ezidingekayo. izingxenye ngamunye axhunyiwe nge glue noma kabili emaceleni ingcina tape. Ukuze uthole usizo uyophinde ukuza ethafeni izingubo lokhuni pin. Kufanele isetshenziselwe pre-ukusondelana izici ngamunye. Futhi-ke, ngeke akwenze ngaphandle sikelo. Ngosizo lwabo, sizokwenza ukuphuma imininingwane ingubo.
Ukwenza umfuziselo eziyinkimbinkimbi nge imicibisholo kanye nasemihlanganweni emikhulu, kumele ube namakhono akhethekile lokuthunga. Kukhona akwanele ngaphandle inaliti ngentambo. Kodwa thunga izingxenye umshini wokuthunga noma kunjalo engenakwenzeka. Cellophane sisetshenziselwa izinto ezizwelayo. Phakathi nalokho kubingelelana, kungaba nje aphule.
Excellent uyobheka ingubo miniature aphume udoti izikhwama. Photo wale ntombazane timphahla tekubhukusha uqinisekile ukuze bahlabe abanye umxhwele. iphakethe elilodwa kuphela ingasetshenziswa ukwenza imodeli. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe amandla kokuqala komsebenzi. Ideal eziqinile udoti isikhwama ephethe namandla angaphezu kwayikhulu amalitha.
Ithuluzi eliyinhloko ngokwenza dress kuyoba isikele. Kuyadingeka ukwenza izimbobo ezintathu - ekhanda izingalo. Yilokho ingubo futhi zilungele. Hlobisa nge umkhiqizo kungaba yibhande imibala okungafani noma Cellophane, futhi wenza udoti izikhwama. On le ngubo, asebenzise okungenani isikhathi nomzamo.
The main focus - ngokungafani
Ngempela imodeli elikhanyayo zingenziwa udoti izikhwama, zehlukene umbala, ukuthungwa shape. Namuhla, nezitolo ezinkulu kukhona omningi udoti izikhwama. I ihlukahluke kuyoba choice, ngcono ungazwakalisa nemicabango yabo. Indlela liqukethe layering ezihlukahlukene amaphakheji komunye nomunye. Ngakho ungathola omangalisayo ingubo sengiprofethile. Ngaphezu kwalokho, le ngubo uyoba umbala original. Ngenxa yokuthi izakhi ngabanye kungahluka kakhulu komunye nomunye.
Made ingubo Fluffy nje. Njengoba isizathu kudingeka sezinsini. It uzobopha pre-ezilungiselelwe strip ukuncishiselwa kusuka udoti izikhwama. Top ingubo zingenziwa isimiso esifanayo njengoba e imodeli odlule. Okungukuthi, iphasela yesigayegaye ukuba usike umgodi ukuze ikhanda nezandla. Ungase futhi wenze corsage. Kodwa le ndlela wenziwa imodeli ngaphambi nje kokuphuma. Yekuchumana kulokhu aphethwe kanye tape zamazwe amabili.
Enye okufana ezithakazelisayo yokukhiqiza izingubo kuyinto udoti izikhwama emoyeni eluhlaza ukugcwalisa. Ukuqalisa ezifana umbono isidingo isisekelo. Lokhu kungafaka ukugujwa ingubo endala noma wathungela isikibha. Udoti izikhwama elifakwe emoyeni, futhi uboshelwe engeyokuqala. Etholwe "Balloons". Kungcono ukuhanjwa nomqulu omncane amaphakheji. izakhi Ngaphezu kwalokho babuye exhunywe phansi base pre-ezilungiselelwe.
Ukwakha i dress yokuqala uzodinga isikhathi esiningi. "Ibhola" ngamunye kumele uvalwe esigaxe. Ungasebenzisa inaliti encane mncane. Kufanele siqinisekise ukuthi awusebenzi waqala iphakethe, kungenjalo wonke umsebenzi ngeke ize eziyihaba ukuza. Outfit bezikhwama eqolo kukadoti esiwusizo okungenani. Kungaba ngokulambisa ume. Hlala phansi ingubo ngeke aphumelele.
Cellophane kabanzi hhayi kuphela ibhizinisi izingubo, kodwa futhi ku ukunitha. Nehhuku ezivamile zingenziwa ingubo yasekuqaleni ngempela kusukela izikhwama udoti. Izithombe umkhiqizo uyokhanga eziningi. Phela, isithombe kungaba nzima ukuhlonza impahla umthombo. Kusukela side kubonakala sengathi ngubo wenza ntambo ezivamile.
Ukuze tie ingubo udoti izikhwama, uzodinga inombolo 2 hook, futhi omningi udoti izikhwama. Desirably kusengaphambili umthombo ukunikezela impahla. Uma akwanele, kuyoba nzima ukuba uthole umbala kukho efanelekayo.
Kakhulu ngokushesha bakwamukele ingubo eyenziwe udoti izikhwama. Ukufundiswa uku ukunitha kumbuthano lamakholomu. Kubalulekile ukuze kuthuthukiswe ilungelo thatha izilinganiso zakho. Ngemva Cellophane akakwazi ngokuthi i material nokunwebeka.
Kubukeka izingubo amahle kusuka udoti izikhwama, kwakhiwa okuyinto phezulu hook, futhi phansi - we ngaphambilini walungisa "Balloons". Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo engase aklonyeliswe lace, ubuhlalu kanye Indwangu izimbali.
Barrettes, lapho kusetshenziswa imishini kanzashi, efanelekayo zonke
Indlela efanele futhi sisheshe senze imvilophi ezenziwe iphepha
Butterfly ngebumba ngezandla
Nelineni umphetho kanye nokusebenza kwayo
Jar ne izifiso yezandla zabo, "izizathu 100 kungani Ngiyakuthanda" ababathandayo
Kanjani ukudla ngezinti kahle?
Bitcoin: indlela yokwenza imali ngaphandle utshalomali
Yini ehlukanisa entabeni entabeni: izici eziyinhloko
Fashion mkhuba isizini - esikhwameni-ubhaka. Female isitayela eyinkimbinkimbi
Ukunikeza - kuyini futhi esibophezelayo kanjani lo mbhalo?